Alahady 6B Paka (Jn 15,9-17) 06/05/2018 | FKMP
Alahady 6B Paka (Jn 15,9-17) 06/05/2018
ANTSOINY HOE « SAKAIZA AHO. »
Hambaran’i Jesoa amintsika amin’ny Vaovao Mahafaly anio fa Tia antsika Izy toy ny hitiavan’ny Ray Azy. « Tahaka ny nitiavan’ny Ray Ahy no nitiavako anareo koa, ka mitomoera amin’ny fitiavako ianareo. » (Jn 15,9) Tsy hoe notenitenenin’i Jesoa fotsiny io fa tena marina ary notanterahany tokoa. Fa moa tsapantsika ve ny fitiavany antsika ? Fa tsy vitan’izay ihany fa inona no mba hataontsika manoloana izany Fitiavany antsika izany ? Tsy fitiavana ambava fotsiny ny Azy fa tena noporofoiny hatramin’ny farany. Natorony sy nataony mihitsy izay mahasoa antsika. Tiany ho sambatra sy ho faly mandrakariva isika ka hamporisihany isan’andro mba hitandrina ny didim-pitiavany. Hoy indrindra Izy : « Izao no didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. » (Jn 15, 12) Fitia mifamaly mahatsara fihavanana hoy ny Ntaolo Malagasy. Koa rariny sy hitsiny tokoa raha miaina io Fitiavana io isika satria tian’Andriamanitra. Diniho ange hoe Tia anao Izy nefa ianao tsy tia Azy na tsy mba manatanteraka izay voalazany e !Lasa fitiavan-tena ny antsika raha izany satria mila ny Fitiavany isika fa tsy mba miaina ilay Fitiavany.
Hambarany anio koa fa hantsoiny hoe Sakaiza isika rehefa manatanteraka izay lazainy amintsika. « Ianareo no sakaizako, raha manatanteraka izay andidiako anareo. » (Jn 15,14) Mbola miangavy antsika hatrany Izy hiaina ny Didim-pitiavany. Izaho olombelona mpanota ity moa dia hataon’Andriamanitra hoe sakaizany. Tsy mba mahafaly ahy ve izany e ? Tsy mba mamporisika ahy hifikitra Aminy sy hanatanteraka izay voalazany ve izany e ? Mazava ho azy fa Izy koa ange izany sakaizako e ! « Ny sakaiza dia tia amin’ny fotoana rehetra ; amin’ny fahoriana, mitsanga-ko rahalahy izy. » (Ohabolana 17,17) Efa hatrany amin’ny Testamenta Taloha dia nambaran’Andriamanitra foana io hoe Sakaizany io isika. Hoy Izy ao amin’ny Bokin’ny Ekleziastika hoe : « Tsy mahamenatra ahy ny miaro ny sakaizako.» (Ekl 22,23)
Koa aoka ary isika tsy hanadino izany Teny mamy avy amin’Andriamanitra izany. Tsy mandao antsika Izy fa tena Sakaiza mahatoky tokoa. Miaro antsika. Tsy manadino antsika. Maniry mandrakariva ny hahasambatra sy hahafaly antsika. Fa isika mba ahoana e !
Previous Post: Sabotsy 5B Paka (Jn 15,18-21) 05/05/2018
Next Post: Talata 6B Paka (Jn 16,5-11) 08/05/2018